Ozbekistana: Ady amin’ny fanivanana ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2008 19:15 GMT
Amin’izao fotoana, i Ozbekistana dia mitoetra ho iray amin’ireo firenena mpamoritra aty amin’ny faritra ary mifehy mafy ny fampahalalàm-baovao mitodika amin’ny daholobe. Na dia misy aza ireo fampanantenana poak’aty [anaran-tsy very] ho fiantohana ny fahalalahàm-pitenenana, dia tsy afa-bela amin’ny fanenjehan’ny governemanta hatrany ny fampahalalàm-baovao. Ny toko faha 5 ao amin’ny lalàn’ny Repoblikan’i Ozbekistana mikasika ny fampahalalàm-baovao mitodika amin’ny daholobe [ru] dia milaza fa ny fampahalalàm-baovao mitodika amin’ny daholobe manerana ny firenena dia malàlaka ary afaka miasa tsy misy teritery mifanaraka amin’ny lalàn’ny firenena. Ao anatin’io lalàna io ihany, ny toko faha-7 dia milaza fa tsy misy mihitsy ny sivana eto amin’ny firenena ary tsy misy olona manan-jo hitaky fanomezan-dàlana mialoha momba ny fitaovana fanontàna, ka hanova na hanàla ireny amin’ny trano fanontàna (fampitàna onjam-peo).” Na dia izany aza, ijoroanay ho vavolombelona ny zava-mitranga mifanohitra amin’ny voalàzan’ny lalàna aty Ozbekistana.
Ny tontolon’ny blaogy eto Ozbekistana ankehitriny dia mifanakalo hevitra mitady izay fomba hiadiana amin’ny sivana atao amin’ny aterineto eto Ozbekistana. Ny asa tena azo tsapain-tànana dia izay nokarakarain’ny Masoivohom-baovao Fergana.ru, Uznews.net sy ny blaogin’ny Fiaraha-monim-pirenena eto Ozbekistana. Ireo mpikarakara dia nametraka fa ny fandraràna ny fampahalalàm-baovao tsy miankina sy tsy momba ny atsy na ny aroa dia nanjary nanaraka tanteraka ny zava-nitranga tao Andijon tamin’ny 2005, ary ankehitriny dia an-jatony maro ireo tranonkalan-tserasera tsy afaka tsidihana intsony noho ny fanaraha-maso ataon’ny fanjakana amin’ireo orinasa misahana ny tolotra aterineto. Ny blaogy ” Fiaraha-monim-pirenena eto Ozbekistana ” dia manentana ireo tranonkalan-tserasera rehetra tratry ny fanakànana mba hifanome tànana amin’ity hetsika ity. “Isan’ny ao anatin’ny fanentanana,” hoy ry zareo,” ireo tranonkalan-tserasera tsy avela tsidihana ao Ozbekistana izay ampirisihana mba hamoaka, ao amin’ny takila fandraisan’izy ireo, ny sary famantàrana milaza fa voaràra izy ireo, manontolo na amin’ny ampahany, ao Ozbekistana” [ru].
Ny sampan’ny BBC-Ouzbek dia mitatitra fa ny mpikarakara dia manambàra ny haharetan’ny hetsika mandra-pandrain’ny governemanta Ozbekistana fepetra hanatsaràna kokoa ny toeran’ny fampahalalàm-baovao ka hanafoana ny sivana eto amin’ny firenena [uz].
Blaogy iray Though the Eyes of Uzbekistani no nanoratra fa antony iray anatin’ny maro manosika azy ireo handray anjara amin’ny ady amin’ity sivana ity dia noho izy ireo voasakana ao Ozbekistana, ary ireo tompona blaogy dia tsy afaka mampifanaraka amin’ny zava-misy ny blaogy amin’ny fomba mivantana.
Indrisy anefa, mitohy hatrany ny fanakànana tranonkalan-tserasera sy loharanom-baovao eto Ozbekistana. Voasakana koa ny blaoginay eto amin’ny firenena. Ho anay, mpanoratra, tena sarotra tokoa ny mampifanaraka amin’ny zava-misy ny blaogy eto Ozbekistana. Manampy anay ireo nàmana any ivelan’I Ozbekistana mba handresena io olana io, toy ny androany, na ireo lohamilina mampiasa proxy aza dia tsy afa-miasa, indrindra moa fa hoe mandefa hafatra petaka samihafa sy sary izany.
Nanam-bintana aho afaka niresaka tamin’ny iray amin’ny mpanoratra ao amin’ny blaogy Though the Eyes of Uzbekistani momba ny hetsika hiadiana amin’ny sivana ampiharina amin’ny aterineto. Tsy dia manam-panantenana loatra hahita vokatra amin’ny tanjona tian-ko tratrarin’ny hetsika izy, toy ny finoany fa tsy hanova ny toe-javatra firy ry zareo, . “Tsy hahomby ny hetsika, raha ireo vondron’olona fototra tena kendrena – ny vahoaka Ozbekistani – dia tsy manam-pahafàhana hitsidika azy ity. Andrana hafa tokony hizorana ny fisarihana ny sain’ny fikambanam-be iraisam-pirenena hijery ny olana ao Ozbekistana, ary tsy misy afa-tsy izay. Na izany aza, tsy maintsy andramantsika,” hoy izy.
Na izany aza tsy dia betsaka loatra ireo tranonkalan-tserasera namaly ny antso, ireo mpikarakara dia manam-panantenana amin’ny filazany fa mbola hahasarika bebe kokoa izy ity afaka fotoana fohy, mbola vao miantomboka rahateo ny hetsika. Ireo blaogy hafa be mpahalàla tratry ny fandraràna ao Ozbekistana neweurasia (norarana tamin’ny Jona 2006), Registan (norarana tamin’ny martsa 2007), Global Voices Online, sy ireo blaogin’ny mpanohitra Turonzamin sy Yangidunyo.